Zavamaniry misy poizina ho loharanon'ny loza amin'ny trano sy ny zaridaina
Zavamaniry misy poizina ao amin'ny zaridaina sy trano | Mitso-drano anao
Raha ny fitsipika dia saika ny zava-maniry rehetra ao an-trano sy ao an-jaridaina dia tsy mety amin'ny fanjifana
Fikarohana amin'ny Internet na boky momba ny famaritana
Ampidiro amin'ny zaridaina ny ankizy
Famaranana izay tokony hatao
Sarin'ireo zavamaniry misy poizina voafantina
Hercules shrub / hogweed goavambe
Inona no hatao rehefa avy nifandray tamin'ilay hogweed goavambe
Ambrosia dia atahorana ho voan'ny allergy
Matetika izy ireo dia tsara tarehy ary mandravaka ny efitranontsika sy ny zaridaina - zavamaniry misy poizina, kirihitra ary voaroy. Matetika tsy mampidi-doza ho an'ny biby, fa matetika mandrahona ny ain'ny olombelona.
Raha ny fanadihadiana natao dia laharana fahatelo ny lozam-pifamoivoizana misy poizina vokatry ny zavamaniry sy voaroy. Ity tranga mampatahotra ity dia tokony hampandrenesina ny ray aman-dreny ary hiantohana fa hizaka tsara kokoa amin'ny resaka zavamaniry misy poizina izy ireo alohan'ny nitrangan'ny lozam-pifamoivoizana mahatsiravina.
White Christmas rose - zavamaniry misy poizina ho loza, indrindra ho an'ny ankizy
Koa satria liana amin'ny fahalianana ny ankizy ary te hikasika sy hametraka am-bavany izay zava-baovao aminy ary toa manintona, dia tsy tokony ho fantatry ny ray aman-dreny foana hoe aiza ny zaza ary inona no apetrany am-bavany.
Indrindra amin'ny toerana maitso malalaka toy ny kianja filalaovana sy valan-javaboary, izay tian'ireo ankizy mihantona ihany, dia matetika any anaty ala no misy ny loza. Eto ny ray aman-dreny dia tsy tokony hamela ny zanany tsy hiambina ary tsara kokoa ny mijery akaiky ny manodidina mialoha ary hampahafantatra mivantana ny ankizy momba ireo zavamaniry mifandraika amin'izany.
Tsy ny zavamaniry rehetra no miteraka fanapoizinana mafy, fa na ny habetsahan'ny kely aza dia ampy handrisihana ny fandoavana sy ny fivalanana. Ny zavamaniry sasany koa dia misy poizina izay mety hisy vokany tsy mahafinaritra amin'ny hoditra raha mikasika fotsiny ka mety may may kely ohatra.
Raha ny tranga ratsy indrindra kosa dia misy poizina zavamaniry sasany mety hitarika ho amin'ny fahafatesana, satria ny vatan'ny zaza indrindra tsy mbola manana paik'ady fiarovana hamotehana na hamongorana ny poizina ara-potoana.
Mba hisorohana an'izany, ho fitsinjovana ny zanany, ny ray aman-dreny dia tokony hisoroka ny karazan-javamaniry ravina sy kirihitra misy poizina ao an-tranony.
Raha tsy azon'ny ray aman-dreny tanteraka hoe iza amin'ireo zavamaniry na zavamaniry poti no tena mety manimba eo amin'ny tontolo iainan'izy ireo dia tokony hahazo torolàlana avy amin'ny fivarotam-boky izy ireo. Na manaova fikarohana amin'ny Internet ary mandehana mamaky ny isan'ny zavamaniry anao miaraka amin'ny sary sy ny famaritana ary esory izay zavamaniry misy poizina mety misy.
Izay mikasa ny zaridainany dia tsy tokony hihazona ireo zavamaniry sy kirihitra rehetra izay ao anatin'ny lisitry ny zavamaniry misy poizina hatramin'ny voalohany.
Mety hanampy ihany koa ny fanaovana zaridaina miaraka amin'ireo ankizy, raha toa ka efa antitra izy ireo ary afaka mahatakatra ny antony. Amin'izany fomba izany, ny ray aman-dreny dia afaka mampandre ny zanany mivantana momba ny loza ary mampiseho azy ireo ny zavamaniry sahaza azy. Izy io koa dia manamafy ny fahatokisan'ny ankizy ary manome azy ireo fahatsiarovan-tena hafa momba ny natiora sy ny zavamaniry.
Ao amin'ny torolàlana, ireo zavamaniry misy poizina mahazatra sy ny vokany mety hitranga dia faritana amin'ny an-tsipiriany sy asongadin'ny sary hatrany. Ireo boky ireo dia matetika koa ao amin'ny fanontana tantaram-pahalalana zaza, izay mahatonga azy io ho mora takatry ny ankizy fa maro amin'ireo voankazo sy voninkazo toa manintona sy mitaona no natokana ho an'ny tontolon'ny biby.
Ny fanabeazana ny ankizy amin'ny fotoana mety dia hisorohana lozam-pifamoivoizana maro sy hamonjy ain'olona. Ny ankizy dia tokony ho afaka hahita an'izao tontolo izao tsy amin-tahotra, fa koa hahafantatra fa mety hisy loza ateraky ny tsy fantatra rehetra.
Izay manan-janaka kely kokoa na mikasa ny ankizy dia tokony hiatrika ny zava-maniry misy poizina, ny voka-dratsiny ary ny fepetra fanampiana vonjy maika tsara aloha mba hahafahany mihetsika tsara amin'ny tranga ratsy indrindra. Raha sendra naka zavatra misy poizina ilay zaza tsy nahy dia tsy azo ihodivirana ny fitsaboana ataon'ny mpitsabo. Ny zava-dehibe indrindra dia ny fanananao miaraka aminao hatrany ny ivon-toerana fanaraha-maso poizina. Amin'ity tranga ity, manampy koa ny fahalalana izay zavamaniry natelin'ny zaza, satria ny fepetra marina dia azon'ny ray aman-dreny atao eo an-toerana alohan'ny hahatongavan'ny fiara mpamonjy voina iray.
Tianay ny manasongadina fa tsy afaka mampiseho afa-tsy vitsivitsy amin'ireo zavamaniry misy poizina izay atahorana indrindra ho an'ny ankizy isika. Azafady mba mariho ihany koa fa tokony hanontany loharano maromaro foana ianao hamantarana zavamaniry, satria mety tsy hitovy ny fisehon'ireo zavamaniry. Ny tsindry amin'ny sary dia manokatra ny galeri-tsary:
Oleander - AZA mampiasa hazo oleander ho an'ny mofo tapa-kazo!
Mpampivelona - mitovy be amin'ny voay
Hazo goavam-be / Hercules
Lily amin'ny lohasaha - mora mifangaro amin'ny tongolo gasy
Eisenhut: ny mahafaty ny hoditra fotsiny dia mety hahafaty ny zaza
Henbane / Noely nitsangana
Ny sarivongana Hercules dia fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe Giant Hogweed na Bear Claw. Ny hogweed goavambe dia avy amin'ny fianakaviana zavamaniry umbelliferous ary avy any Kaokazy voalohany. Tany Eropa no nisehoan'ny zavamaniry tamin'ny 1985.
Hogweed goavambe - maniry Hercules
Ny Herkulesstaude dia mety hahatratra hatramin'ny telo metatra. Ny zana-kazo efa misy dia maizimaizina ary manana volo madinidinika eraky ny zavamaniry Ny savaivon'ilay tahony dia roa ka hatramin'ny folo santimetatra, miankina amin'ny haben'ny zavamaniry amin'ny ankapobeny. Ny ravina maitso an'ny hogweed Risesn dia iray metatra ny halavany. Ireo voninkazo somary lehibe matetika dia manana savaivony 30-50 santimetatra.
Ny kirihitrala Hercules dia mety ahitana voninkazo hatramin'ny 80.000 isanisany. Ny vanim-potoana voninkazo dia manomboka amin'ny volana Jona ka hatramin'ny faran'ny Jolay. Ireo voninkazo fotsy dia manana savaivony 2 santimetatra farafahakeliny ary maniry lehibe kokoa mankany an-tampony. Koa satria ny ravina fotsy volo dia toa mitovy amin'ny an'ny tongotry ny bera, dia nomena anarana hoe orsa noho ny antony ny zavamaniry.
Maty ny zavamaniry rehefa avy niforona ny palitaon'ny pod. Raha tsy matotra ilay zavamaniry dia afaka miaina mora foana mandritra ny taona maro. Ny mason'ny Herkulesstaude dia afaka mitsimoka mandritra ny taona maro.
Ny kirihitrala Hercules dia tsy maniry amin'ny tany misy asidra. Raha tsy izany dia tena tsy mitaky anarana izy ary mila masoandro kely fotsiny mba hahavelomana mandritra ny taona maro.
Ilay hogweed goavambe dia misy ilay antsoina hoe furocoumarins, izay miteraka fihetsika amin'ny hoditra aorian'ny fifampikasohana amin'ny hoditra. Na dia ny fifampikasohana fohy amin'ny ravina aza dia mety ampy hahatonga ny hoditra hidina mena be. Amin'ny toe-javatra ratsy kokoa, dia mety hipoitra amin'ny hoditra mihitsy aza ny vay. Tena maharary sy mora mirehitra ireo ary mety hiteraka fahamaizana voalohany sy faharoa. Ankoatry ny fahasosoran'ny hoditra sy ny blaom-pitomaniana dia mety hiteraka ihany koa ny tazo, ny olana amin'ny lalan-dra ary ny hatsembohana. Mety haharitra herinandro maro ireo fihetsika ireo.
Raha nifandray tamin'ny zavamaniry ianao dia tokony hosasana amin'ny savony sy rano tsara ny faritra misy ny hoditra. Raha nisy ny fahasosorana amin'ny hoditra dia tokony hifampidinika avy hatrany ny mpitsabo hoditra ka afaka ampiharina ny fitsaboana sahaza azy.
Mifanohitra amin'ny hogweed goavambe, ny hegweed ahitra dia teratany eropeana. Ny hogweed goavambe dia hita eny amoron'ny banky sy ny hady ary aleony maniry eo amin'ny tany mando sy malalaka. Ireo zavamaniry roa dia mitovy endrika. Rehefa tanora ny zavamaniry dia tsy dia misy ahiana ny manapoizina.
Ambrosia dia karazana zavamaniry ary antsoina koa hoe ragweed. Tsy any Alemana ihany no miparitaka ity karazan-kazo ity fa manerana an'i Eropa ihany koa. Ny vanim-potoanan'ny voninkazo dia eo anelanelan'ny volana Jolay sy Oktobra, fa ny vovobony kosa dia mety miteraka allergy.
Saingy tsy mora ny mamantatra ny zavamaniry ambrosia. Ny olombelona no tompon'andraikitra voalohany amin'ny fampitomboana ny fiparitahana rehefa atsangana amin'ny ririnina ny toerana fihinanam-borona (toy ny baomba tit.)
Ambrosia dia sarotra ny mamantatra azy
Amin'ny lohataona dia mipetaka amin'ny tany ireo zana-ketsa, izay ahafahan'ny masomboly mitsimoka mandritra ny taona maro taty aoriana. Ny voan'ny ragweed dia ao amin'ny voan'ny vorona, na dia efa nihena be aza ny ampahany raha oharina amin'ny taloha, saingy ny fangaro toy izany dia tsy azo sorohana tanteraka. Na dia misy fonosana misy marika misy soratra hoe "tsy misy voa ragweed misy", dia mety mbola misy residues. Ho fanampin'izany, ny masinina amin'ny fambolena dia afaka manaparitaka ireo voa eny amin'ny habakabaka ary amin'izany dia miantoka ny fielezany.
Mampiavaka ny ambrosia
Ny zavamaniry ambrosia dia tsy mora ekena ary tsy misy miharihary, ary misy karazana doppelganger aza, dia ilay karaoty sy wormwood. Raha maintso eo ambany ny ravina ary hita ny fotony maniry, volo dia mety ho ambrosia. Ny felam-boninkazo ao amin'ny zavamaniry Ambrosia dia somary lava, raha eo amin'ny mugwort kosa dia piramida.
Raha misy tsy fahatokisana lehibe dia azo alefa any amin'ny birao fanaovana tatitra eo afovoan'ny fanjakana federaly maro ny sarin'ilay zavamaniry. Misy ny tahiry efa misy izay angonina ny zava-drehetra momba ny fiparitahan'ny zavamaniry. Ireo mpikarakara zaridaina fialamboly manokana dia afaka mahazo vaovao eto momba ny fomba hiarovan-tena amin'ny zava-maniry mafy loha ity. Mandritra izany fotoana izany dia misy ihany koa ny tatitra momba ny minisiteran'ny toekarena, izay ny tanjona dia ny hisorohana ny fanaparitahana an'io zavamaniry io.
Mba hanapotehana amin'ny fomba mahomby ny zavamaniry ambrosia dia tsy maintsy esorina tanteraka miaraka amin'ny faka izy io alohan'ny tena voninkazo. Na izany aza, raha efa niparitaka ny felam-boninkazo iray dia tokony hesorina aloha ny fomba voninkazo. Ny dingana manaraka dia ny faka ary tsy maintsy esorina tanteraka, satria afaka mamelombelona haingana dia haingana ny zavamaniry. Na ahoana na ahoana, tsy tokony hisafidy fako biolojika na zezika alefa ianao, satria mety hiparitaka izany. Ny safidy mety amin'ny famotehana dia ny fako sisa tavela.
Mba hanesorana ambrosia azo antoka amin'ny zaridaina dia tsy maintsy atao fonon-tanana na ahoana na ahoana, raha tsy izany dia mety hipoitra ny hoditra. Raha efa vesaran'ny aretin-tsaina ianao, dia tsara kokoa ny manalavitra tanteraka ilay zavamaniry, satria mety hisy dikany lehibe ny vokatry ny vovobony. Saika tsy misy fanetsiketsehana mahery vaika toy izany ao amin'ny tontolon'ny zavamaniry. Na dia ny fifantohana ambany amin'ny rivotra aza dia mety hiteraka fifantohana mahazaka. Ny marary allergy all fever dia afaka miaina malalaka manomboka amin'ny volana aogositra, fa satria ny zavamaniry ambrosia dia manohy mizara ny vovobony hatramin'ny septambra, dia mbola misy ambaratonga fampitandremana avo ho an'ireo marary allergy.
Milalao ao an-trano - lalao ao amin'ny trano
Fetra zaridaina | Miaina miaraka amin'ny zaridaina